ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ကိုInternationalကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်နေတာပြောပါရစေလို့ ပြောလိုက်တဲ့ဒါရိုက်တာဉာဏ – PAPAWADY
Posted on February 1, 2018 February 1, 2018 by papawady
ဥပါယ်တံမျဉ် ကို ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ် တော်တော်များများက ရုပ်ရှင်ကြည့်အပြီးမှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရီဗျူး တွေရေးပြီး မြန်မာကားလို့ မထင်ရအောင်ကောင်းတဲ့ ကားလို့ သုံးသပ်ကြတဲ့သူတွေရှိသလို ၊ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားဟာ အတော်ကိုလှုပ်ခတ်သွားပြီး မြန်မာရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ လူဟောင်းများတောင် အရေးတယူနဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ထိအောင်မြင်သလို ၊ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေရဲ့ ၀န်းရံမှုလည်းအတော်ကို မြင့်တက်နေတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ February ၁ ရက်နေ့ မှာတော့ ဒါရိုက်တာ ၊ ဓာတ်ပုံဆရာ ဉာဏက သူ့ရဲ့ အမြင်ကို Facebook ပေါ်မှာ Public ဖြင့်ရေးသားခဲ့ပြီး အောက်ကကွန့်မန့် တွေကြောင့်ပြန်လည်ဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရေးထားတဲ့စာဟာ Facebook အသုံးပြုသူတွေကြားမှာ အတော်များများရှဲပြီးနေပါပြီ။ ရေးထားတာက ဒီလိုပါ။
ကောင်းသတင်းတွေနဲ့ကျော်ကြားနေတဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်ကို လေ့လာတဲ့အနေနဲ့ရော အသစ်တွေအများကြီးအားဖြည့်ထားတာကိုစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ရော သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ကင်မရာအကြောင်းစပြောချင်ပါတယ်။ရုပ်သေဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ် အဓိကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ focus outတာတွေက ဇာတ်ကားရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်… ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတာ စဉ်းစားလို့မရပါဘူး ရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက monitor သေချာမကြည့်ခဲ့တာကြောင့်များလား???? နောက်တစ်ချက်က grain တွေများလွန်းနေတာပါ။ နောက်တစ်ချက်က prime lens တွေကိုမသုံးတာလား lensရဲ့ အရည်အသွေးမကောင်းတာကြောင့်လား ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားရဲ့ရုပ်ထွက်ပိုင်းမှာ အရုပ်ကျစ်လစ်မှုအားနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
မင်းသား showroom ကနေကားနဲ့ထွက်ပြီးမှန်ဝယ်ဖို့အတွက်ဘဏ်ကိုသွား ဘဏ်ရောက်တော့ ထိုင်းမလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခန်းဆိုရင် ရုပ်ရှင်ပညာမှာ establishing shot ကနေ master shotကို သွားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အဲဒီအတိုင်းဆိုရင်မင်းသားကားပေါ်စတက်ခါစကနေ ကားအထွက်လေးကိုပြသင့်ပါတယ်… ဒီမှာကကားဆီကိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့ duration ရှည်နေပြီး ကားမောင်းမထွက်ခင် cut လိုက်တာကလိုအပ်ချက်တစ်ခုပါ… ဒါက ဒါရိုက်တာအပိုင်းပါ … မင်းသားဓါတ်တိုင်အောက်မှာ ခြေပြစ်လက်ပြစ်ထိုင်ချပြီး ညစ်နေတဲ့အခန်းမှာ camera angle ကိုအဲဒီလိုလုံးဝမယူသင့်ဘူးဆိုတာ စနစ်တကျတတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်.. အဲဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံးညာဖက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းတော့ထောင်ထားသင့်ပါတယ်။အခုပုံစံနဲ့ဆိုတော့ ခြေတိုခြေပြတ်ကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ view ပါ။Scene တွေမှာ camera shootတွေက static တွေများလွန်းပါတယ်။ကျနော်ပြောချင်တာက dolly shoot, zolly shoot တွေ crane shoot တွေပါမှ ကောင်းမယ်လို့ဆိုလိုတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် static(အငြိမ်)တွေများနေတာတော့သေချာပါတယ် … static တွေရိုက်တာတောင် focus out နေတော့ movement camera work တွေကိုရှောင်တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်… camera’s point of view, composition တွေကသာမန်ပါပဲ Lighting အကြောင်းပြောပါမယ်ဒီကားမှာ ambient light ကိုအဓိကသုံးသွားပါတယ် ရိုးရိုးလေးတွေပါပဲတစ်ချို့အခန်းတွေမှာ day lightနဲ့ studio light ratio ကွာလွန်းတာကြောင့် အပြင်ဖက်ကမြင်ကွင်းတွေဆုံးရှုံးပြီး burn out ဖြစ်တာတွေရှိပါတယ်… ထိုင်းမလေး သီချင်းဆိုပြတဲ့အခန်းမှာ close up နဲ့ wide shot တွေမှာlighting လွဲတာကတော့သိသိသာသာပါပဲ။lighting ပိုင်းက ခက်ခက်ခဲခဲတစ်ခုမှမပါလို့ ပြောစရာအထွေအထူးသိပ်မရှိပါဘူး။
ဇာတ်ညွှန်းအကြောင်း ဇာတ်ညွှန်းလေးကောင်းပါတယ်။နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်မှာ Awake ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းသဘောမျိုးလေးပါ။ twistလုပ်သွားတာ ကောင်းပါတယ်… ဒါပေမယ့် တည်တည်ခန့်ခန့်ကြီးသရုပ်ဆောင်လာကြပြီးမှ စုံထောက်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခန်းက ဇာတ်လမ်းရဲ့အနှစ်သာရကိုထိခိုက်စေပါတယ်… တိုက်ပုံအင်္ကျီနဲ့တည်တည်တံ့တံ့နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို rapper ဦးထုပ်ပေးဆောင်းလိုက်သလိုပါပဲ… ဒီထက် ထက်မြက်စူးရှတဲ့ ဘိုးတော်တစ်ယောက်ဆိုရင် ပိုကြည့်ကောင်းမလားပဲ။တစ်ချို့အခန်းတွေ duration များတော့ ကြည့်ရတာအိုင်ပါတယ်… tempo ပိုတက်လာရမယ့် တရားခံလိုက်ရှာတဲ့အခန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခန်းတွေမှာ tempo အကျဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။တရားခံကိုစောင့်နေရင်းပြင်ဆင်နေကြတဲ့အခန်းကို time lapse နဲ့မပြသင့်ပါဘူး … ဇာတ်ကိုပေါ့စေပါတယ်… ဒါကတော့မဟာအမှားကြီးလို့မြင်မိပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ပိုင်းပြောချင်ပါတယ်…မင်းသား … ဇာတ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဇာတ်ရုပ်tempoကို ငြိမ်နေအောင်ထိန်းသွားနိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တယ်… သရုပ်ဆောင်သစ်ဆိုတဲ့ message ကို ပရိသတ်အတွေးထဲကနေဖျောက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့မြင်မိတယ်။မွန်မွန်(သက်မွန်မြင့်) ဒီလောက်အမူယာလေးနဲ့တော့တက်မလာနဲ့ မွန်မွန်တို့ကတောက်ချလိုက်တာပေါ့။ သူ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပါ။စိုးရိမ်နေတဲ့မောင့်မျက်နှာလေးကိုချစ်လို့ဆိုတဲ့ အမူယာလေးက မွန်မွန်ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားနေကြပုံစံလေးပါပဲ… မွန်မွန်ထောင်ကထွက်လာပြီးနောက် ကလောကအဒေါ်ကြီးနဲ့ပြန်ဆုံပြီးငိုတဲ့အခန်းအစား တစ်ခြားအခန်းလေးပြောင်းပြလိုက်ရင်ပိုအဆင်ပြေမလားလို့လည်းမြင်မိပါတယ်… အခုလိုငိုနေကြတာကိုပြလိုက်တော့ vamp လုပ်တဲ့သူကို သွယ်ဝိုက်ပြီးသနားအောင်ပြသလိုက်သလို ပရိသတ်စိတ်ထဲမှာကျန်ခဲ့မှာပါ အဲဒီတော့ အားလုံးခြုံပြောရရင် သရုပ်ဆောင်များ … ကောင်း Camera … focus out တာတွေများ/ static shoot တွေများ / grain များ / အရုပ်ကျစ်လစ်မှုအားနည်းဇာတ်ညွှန်း… သင့် ၊ အလင်းအမှောင်… ပုံမှန် ဟူ၍သာ သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။International ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်နေတာအမှန်ပါလို့ပဲပြောပါရစေအမှန်အတိုင်း အမြင်အတိုင်းသာ သုံးသပ်ပါသည်(ဉာဏ)
တချို့ ကွန့် မန့် ပေးတဲ့သူတွေရေးထားတာကတော့ဒီလိုပါ။ (Nyein Htet Great) ကြီး လေးကြီး တို့၊ ဂယ်ပဲ သူရဲတို့၊ ငယ်ကျွန်တို့ကိုလည်း review လေးရေးစေလိုပါတယ်။ ကောလိပ်ဂျပိုးလေးကိုရောပေါ့၊ ပညာရှင့် အမြင် သိချင်လို့ပါ။(Htet Myat Suu Eaim) အစ်ကို့ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ကိုအားလုံးခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်၁။ မြန်မာစာသတ်ပုံ(တချို့)….မှား၂။ အားနည်းချက်များကိုထောက်ပြထားသည်မှာ…သင့်၃။ အားသာချက်နှင့်ကောင်းသည့်အချက်များအားထုထ်ပြော၍ချီးမွမ်းသမှုမပြုနိုင်သည့်အချက်မှာ….စုတ်ပြတ်သတ်အောင်အငုံ့စိတ် ဂျေစိတ်များပြားလွန်း International ကိုသွားမယ့်ခုလို film မျိုးကို criticize လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်နေသေးတာအမှန်ပဲလို့ပြောပါရစေ။(Thet Nor Ko) မင်းသား ဓာတ်တိုင်အောက်မှာ ညစ်ပြီးခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်နေတာကို ဒူးတစ်ဖက်မထောင်လို့တဲ့အဲ့လိုတွေကြောင့် ဒီကောင်တွေကားတွေ ဝမ်းနည်းရင်ဒီလိုလုပ်ဝမ်းသာရင်ဒီလိုလုပ်..ဆိုပြီး actionတွေက အတူတူတွေဖြစ်နေတာ.။သူပြောသလိုက သူတို့ဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသားတွေထိုင်နေကြပုံစံ။သတိလေးသာထား…မလိုက်နိုင်ရင် ငတ်သွားဦးမယ်ဝမ်းနည်းစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်း မင်းအစားငါရှက်ရွံ့မိ.
ဥပါယျတံမဉျြ ကို ရုပျရှငျခဈြပရိသတျ တျောတျောမြားမြားက ရုပျရှငျကွညျ့အပွီးမှာ အှနျလိုငျးပျေါမှာ ရီဗြူး တှရေေးပွီး မွနျမာကားလို့ မထငျရအောငျကောငျးတဲ့ ကားလို့ သုံးသပျကွတဲ့သူတှရှေိသလို ၊ လိုအပျခကျြတှရှေိနတေယျဆိုပွီး ထောကျပွတဲ့သူတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ရုပျရှငျလောကထဲမှာ ဒီဇာတျကားဟာ အတျောကိုလှုပျခတျသှားပွီး မွနျမာရုပျရှငျ ဒါရိုကျတာ လူဟောငျးမြားတောငျ အရေးတယူနဲ့ ဝဖေနျတိုကျခိုကျရတဲ့ထိအောငျမွငျသလို ၊ ရုပျရှငျခဈြပရိသတျတှရေဲ့ ၀နျးရံမှုလညျးအတျောကို မွငျ့တကျနတေဲ့ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ February ၁ ရကျနေ့ မှာတော့ ဒါရိုကျတာ ၊ ဓာတျပုံဆရာ ဉာဏက သူ့ရဲ့ အမွငျကို Facebook ပျေါမှာ Public ဖွငျ့ရေးသားခဲ့ပွီး အောကျကကှနျ့မနျ့ တှကွေောငျ့ပွနျလညျဖကျြသှားခဲ့ပါတယျ။ဒါပမေယျ့ ရေးထားတဲ့စာဟာ Facebook အသုံးပွုသူတှကွေားမှာ အတျောမြားမြားရှဲပွီးနပေါပွီ။ ရေးထားတာက ဒီလိုပါ။
ကောငျးသတငျးတှနေဲ့ကြျောကွားနတေဲ့ ဥပါယျတံမဉျြရုပျရှငျကို လလေ့ာတဲ့အနနေဲ့ရော အသဈတှအေမြားကွီးအားဖွညျ့ထားတာကိုစိတျဝငျစားတာကွောငျ့ရော သှားကွညျ့ဖွဈခဲ့ပါတယျ ။ကငျမရာအကွောငျးစပွောခငျြပါတယျ။ရုပျသဖွေဈဖွဈ ရုပျရှငျဖွဈဖွဈ အဓိကအရေးအကွီးဆုံးဖွဈတဲ့ focus outတာတှကေ ဇာတျကားရဲ့ ၃ပုံ ၁ပုံလောကျရှိနိုငျပါတယျ… ဘာကွောငျ့ဒီလိုဖွဈရလဲဆိုတာ စဉျးစားလို့မရပါဘူး ရိုကျတဲ့အခြိနျတုနျးက monitor သခြောမကွညျ့ခဲ့တာကွောငျ့မြားလား???? နောကျတဈခကျြက grain တှမြေားလှနျးနတောပါ။ နောကျတဈခကျြက prime lens တှကေိုမသုံးတာလား lensရဲ့ အရညျအသှေးမကောငျးတာကွောငျ့လား ရုပျရှငျကားကွီးတဈကားရဲ့ရုပျထှကျပိုငျးမှာ အရုပျကဈြလဈမှုအားနညျးတာကိုတှရေ့ပါတယျ ။မငျးသား showroom ကနကေားနဲ့ထှကျပွီးမှနျဝယျဖို့အတှကျဘဏျကိုသှား ဘဏျရောကျတော့ ထိုငျးမလေးနဲ့တှတေဲ့အခနျးဆိုရငျ ရုပျရှငျပညာမှာ establishing shot ကနေ master shotကို သှားတယျလို့ပွောရမှာပါ။အဲဒီအတိုငျးဆိုရငျမငျးသားကားပျေါစတကျခါစကနေ ကားအထှကျလေးကိုပွသငျ့ပါတယျ… ဒီမှာကကားဆီကိုလမျးလြှောကျလာတဲ့ duration ရှညျနပွေီး ကားမောငျးမထှကျခငျ cut လိုကျတာကလိုအပျခကျြတဈခုပါ… ဒါက ဒါရိုကျတာအပိုငျးပါ … မငျးသားဓါတျတိုငျအောကျမှာ ခွပွေဈလကျပွဈထိုငျခပြွီး ညဈနတေဲ့အခနျးမှာ camera angle ကိုအဲဒီလိုလုံးဝမယူသငျ့ဘူးဆိုတာ စနဈတကတြတျတဲ့သူတှအေနနေဲ့ဂရုစိုကျသငျ့ပါတယျ.. အဲဒီလိုရိုကျမယျဆိုရငျလညျး အနညျးဆုံးညာဖကျခွထေောကျတဈခြောငျးတော့ထောငျထားသငျ့ပါတယျ။အခုပုံစံနဲ့ဆိုတော့ ခွတေိုခွပွေတျကွီးလိုဖွဈနတေဲ့ view ပါ။Scene တှမှော camera shootတှကေ static တှမြေားလှနျးပါတယျ … ကနြျောပွောခငျြတာက dolly shoot, zolly shoot တှေ crane shoot တှပေါမှ ကောငျးမယျလို့ဆိုလိုတာမြိုးမဟုတျပမေယျ့ static(အငွိမျ)တှမြေားနတောတော့သခြောပါတယျ … static တှရေိုကျတာတောငျ focus out နတေော့ movement camera work တှကေိုရှောငျတာလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ… camera’s point of view, composition တှကေသာမနျပါပဲ Lighting အကွောငျးပွောပါမယျဒီကားမှာ ambient light ကိုအဓိကသုံးသှားပါတယျ ရိုးရိုးလေးတှပေါပဲတဈခြို့အခနျးတှမှော day lightနဲ့ studio light ratio ကှာလှနျးတာကွောငျ့ အပွငျဖကျကမွငျကှငျးတှဆေုံးရှုံးပွီး burn out ဖွဈတာတှရှေိပါတယျ… ထိုငျးမလေး သီခငျြးဆိုပွတဲ့အခနျးမှာ close up နဲ့ wide shot တှမှောlighting လှဲတာကတော့သိသိသာသာပါပဲ။lighting ပိုငျးက ခကျခကျခဲခဲတဈခုမှမပါလို့ ပွောစရာအထှအေထူးသိပျမရှိပါဘူး။
ဇာတျညှနျးအကွောငျး ဇာတျညှနျးလေးကောငျးပါတယျ။နိုငျငံခွားရုပျရှငျမှာ Awake ဆိုတဲ့ဇာတျလမျးသဘောမြိုးလေးပါ။ twistလုပျသှားတာ ကောငျးပါတယျ… ဒါပမေယျ့ တညျတညျခနျ့ခနျ့ကွီးသရုပျဆောငျလာကွပွီးမှ စုံထောကျကွီးပျေါလာတဲ့အခနျးက ဇာတျလမျးရဲ့အနှဈသာရကိုထိခိုကျစပေါတယျ… တိုကျပုံအကငြ်္ီနဲ့တညျတညျတံ့တံ့နတေဲ့သူတဈယောကျကို rapper ဦးထုပျပေးဆောငျးလိုကျသလိုပါပဲ… ဒီထကျ ထကျမွကျစူးရှတဲ့ ဘိုးတျောတဈယောကျဆိုရငျ ပိုကွညျ့ကောငျးမလားပဲ။တဈခြို့အခနျးတှေ duration မြားတော့ ကွညျ့ရတာအိုငျပါတယျ… tempo ပိုတကျလာရမယျ့ တရားခံလိုကျရှာတဲ့အခနျးနဲ့တှတေဲ့အခနျးတှမှော tempo အကဆြုံးဖွဈနပေါတယျ။တရားခံကိုစောငျ့နရေငျးပွငျဆငျနကွေတဲ့အခနျးကို time lapse နဲ့မပွသငျ့ပါဘူး … ဇာတျကိုပေါ့စပေါတယျ… ဒါကတော့မဟာအမှားကွီးလို့မွငျမိပါတယျ။သရုပျဆောငျပိုငျးပွောခငျြပါတယျ…
မငျးသား … ဇာတျတဈခုလုံးရဲ့ဇာတျရုပျtempoကို ငွိမျနအေောငျထိနျးသှားနိုငျပွီး ဆှဲဆောငျမှုအရှိဆုံးဖွဈအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတယျ… သရုပျဆောငျသဈဆိုတဲ့ message ကို ပရိသတျအတှေးထဲကနဖြေောကျပေးနိုငျခဲ့တယျလို့မွငျမိတယျ။မှနျမှနျ(သကျမှနျမွငျ့) ဒီလောကျအမူယာလေးနဲ့တော့တကျမလာနဲ့ မှနျမှနျတို့ကတောကျခလြိုကျတာပေါ့။ သူ့အတှကျလှယျလှယျလေးပါ။စိုးရိမျနတေဲ့မောငျ့မကျြနှာလေးကိုခဈြလို့ဆိုတဲ့ အမူယာလေးက မှနျမှနျပရိသတျကိုဖမျးစားနကွေပုံစံလေးပါပဲ… မှနျမှနျထောငျကထှကျလာပွီးနောကျ ကလောကအဒျေါကွီးနဲ့ပွနျဆုံပွီးငိုတဲ့အခနျးအစား တဈခွားအခနျးလေးပွောငျးပွလိုကျရငျပိုအဆငျပွမေလားလို့လညျးမွငျမိပါတယျ… အခုလိုငိုနကွေတာကိုပွလိုကျတော့ vamp လုပျတဲ့သူကို သှယျဝိုကျပွီးသနားအောငျပွသလိုကျသလို ပရိသတျစိတျထဲမှာကနျြခဲ့မှာပါ အဲဒီတော့ အားလုံးခွုံပွောရရငျ သရုပျဆောငျမြား … ကောငျး Camera … focus out တာတှမြေား/ static shoot တှမြေား / grain မြား / အရုပျကဈြလဈမှုအားနညျးဇာတျညှနျး… သငျ့ ၊ အလငျးအမှောငျ… ပုံမှနျ ဟူ၍သာ သုံးသပျရမညျဖွဈပါကွောငျး။International ကိုသှားမယျဆိုရငျတော့ လိုအပျနတောအမှနျပါလို့ပဲပွောပါရစအေမှနျအတိုငျး အမွငျအတိုငျးသာ သုံးသပျပါသညျ(ဉာဏ)တခြို့ ကှနျ့ မနျ့ ပေးတဲ့သူတှရေေးထားတာကတော့ဒီလိုပါ။(Nyein Htet Great) ကွီး လေးကွီး တို့၊ ဂယျပဲ သူရဲတို့၊ ငယျကြှနျတို့ကိုလညျး review လေးရေးစလေိုပါတယျ။ ကောလိပျဂပြိုးလေးကိုရောပေါ့၊ ပညာရှငျ့ အမွငျ သိခငျြလို့ပါ(Htet Myat Suu Eaim) အဈကို့ရဲ့ ဝဖေနျသုံးသပျခကျြကိုအားလုံးခွုံပွီးပွောရမယျဆိုရငျ၁။ မွနျမာစာသတျပုံ(တခြို့)….မှား၂။ အားနညျးခကျြမြားကိုထောကျပွထားသညျမှာ…သငျ့၃။ အားသာခကျြနှငျ့ကောငျးသညျ့အခကျြမြားအားထုထျပွော၍ခြီးမှမျးသမှုမပွုနိုငျသညျ့အခကျြမှာ….စုတျပွတျသတျအောငျအငုံ့စိတျ ဂစြေိတျမြားပွားလှနျးInternational ကိုသှားမယျ့ခုလို film မြိုးကို criticize လုပျခငျြတယျဆိုရငျတော့ လိုအပျနသေေးတာအမှနျပဲလို့ပွောပါရစေ(Thet Nor Ko) မငျးသား ဓာတျတိုငျအောကျမှာ ညဈပွီးခွပေဈလကျပဈထိုငျနတောကို ဒူးတဈဖကျမထောငျလို့တဲ့အဲ့လိုတှကွေောငျ့ ဒီကောငျတှကေားတှေ ဝမျးနညျးရငျဒီလိုလုပျ ဝမျးသာရငျဒီလိုလုပျ..ဆိုပွီး actionတှကေ အတူတူတှဖွေဈနတော.။သူပွောသလိုက သူတို့ဇာတျကားတှထေဲက မငျးသားတှထေိုငျနကွေပုံစံ။သတိလေးသာထား…မလိုကျနိုငျရငျ ငတျသှားဦးမယျဝမျးနညျးစိတျပကျြဖို့ကောငျး မငျးအစားငါရှကျရှံ့မိ.
Posted in သတင်း, အနုပညာရှင်Tagged ဥပါယ်တံမျဉ်, မြန်မာရုပ်ရှင်